About Us - Anke kurongedza Company Limited
Other Unicorn Type mabhodhoro
Kukwira Printing hombodo
Kumonyanisa Cap hombodo
Putsai-kure Tip Bottle
BIG SIZE hombodo
500ML And 1l mabhodhoro
Bheri Cap hombodo
Flat Cap hombodo
Other Popular Pe mabhodhoro
Other Popular PET mabhodhoro
With mashoko uye zvinodiwa tinowana kubva vatengi, Sales Department wedu, Research Dhipatimendi, Production Dhipatimendi, Quality Control Dhipatimendi, kurongedza & Shipping Department uye Mushure okutengesa Department basa pamwe chete kupa mabhodhoro vakakwana.
Sales nokukurumidza uye nemazvo Department-Zadzisai zvigadzirwa. rokutengesa edu chikwata chiri nyanzvi zvinhu uye kukurukura. Tichazotaura ane mufaro kukurukurirana uye kuzosimbisa zvakawanda nyore.
Mukudhinda Department --- Product chaiwo zvigadzirwa hwaunoda. All vashandi vedu vane ruzivo uye kudzidzisa mwedzi wose. The michina achaparadzwa kuongororwa uye yokuzvigadzirisa nguva dzose. Nenzira iyi, hombodo yepamusoro inogona kugadzirwa.
Quality Control Department --- Ivai nechokwadi mumwe chigadzirwa wenyu akakwana. Mumwe mhando Bhodhoro ane unhu kudzora hurongwa. Mumwe chigadzirwa anogona kuongororwa kanenge 3 nguva vasati kutumirwa. Saka Bhodhoro rimwe achava akarurama uye akakwana.
Kurongedza & Shipping Department --- Pave zvauchasangana kugamuchira mabhodhoro zvakanaka nguva. Products vachapiwa vakatutirana muimba gobvu makatoni kudzivirira. Tichatevera wo kuronga kutumira pachine nechokwadi, kamwe zvigadzirwa vakagadzirira, tinogona kuvabudisa.
Kushanda ANKE Apex, uchafarirwa. zvigadzirwa vakakwana uyewo basa nenyanzvi. Ipa tose mukana, uchawana kugamuchira yakavimbika naye.